‘क्षुद्रग्रह १९९८ ओ.आर.२’ पृथ्वी नजिक आउने बारे NASO के भन्छ? « LiveMandu
‘क्षुद्रग्रह १९९८ ओ.आर.२’ पृथ्वी नजिक आउने बारे NASO के भन्छ?
१५ बैशाख २०७७, सोमबार २३:५५
वैशाख १५, २०७७ । सामाजिक संजालमा भईरहेका चर्चा, केहि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अनलाइन पोर्टलमा आएका क्षुद्रग्रह १९९८ ओ.आर.२ सबन्धी समाचारहरुले नेपाली जनमानसमा पर्ने गरेको असरप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहन्छौं।
नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाईटी (NASO)
यस दिन यो क्षुद्रग्रह पृथ्वीदेखी सबैभन्दा नजिक आउँदैछ। तर अत्यन्तै नजिक हँदा पनि यो आकाशीय पिण्ड हामीभन्दा करिब ६२, ८२,००० (बैसठ्ठी लाख बयासी हजार) किलोमिटर टाढा रहनेछ। पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको औसत दुरी करिब ३,८४,००० (तीन लाख चौरासी हजार किलोमिटर) छ। त्यसैले यसरी नजिक आउँदा पनि यो क्षुद्रग्रह हामीबाट चन्द्रमा भन्दा करिब साढे सोह्र गुणा टाडा रहनेछ।
हालको एउटा अध्ययनले यो क्षुद्रग्रहको आकार करिब २ किलोमिटरको रहेको बताइएको छ। सुरुमा यसको आकार १.८ देखि ४.१ किलोमिटर अनुमान गरिएकोमा अरेसीबो वेधशाला ले अप्रिल १८, २०२० मा लिएको रडार तस्विरको अध्ययनबाट यो क्षुद्रग्रह करिब २ किलोमिटरको रहेको बताइएको छ। त्यसैले नजिक आउँदा पृथ्वी-चन्द्रमाको दुरीभन्दा कम्तिमा १६ गुणा टाढा रहने र करिब २ किलोमिटरको रहेकोले साथै यसको औसत् अपेरेन्ट म्याग्निच्युड करिब ११ रहेकोले नाङ्गो आँखाले यसलाई देख्न सकिदैन। यसलाई अबलोकन गर्न ठुलै खालको टेलिस्कोप आवश्यक पर्छ।
हामी आशा गर्छौं यी सूचनाहरु क्षुद्रग्रह पृथ्वी नजिक आउने कुरालाई लिएर हाम्रो समाजमा सृजना भएको त्रास कम गर्न सहयोगी हुनेछन्। साथै आगामी दिनमा खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धि सहि सूचना तथा सम्पूर्ण जानकारीका लागि हामीसँग जोडिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
लेखक भट्टराई ईण्टरनेसनल एष्ट्रोनोमिकल युनियनको राष्ट्रिय जनसम्पर्क संयोजक पनि हुनुहुन्छ ।